Voarara Ny Fanatrehan’Ireo Vehivavy Saodiana Ny Fitsarana Azon’ny Rehetra Atrehina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2013 7:02 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, русский, Aymara, Français, Italiano, 日本語, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany manokana amin'ny lahatsoratray mikasika ny : Fitsarana ireo Reformista Ao Arabia Saodita
Mbola mandràra ny fanatrehan'ny vehivavy Saodiana ireo fitsarana azon'ny rehetra atrehina ihany ny mpitsara Saodiana, na dia hoe havany akaiky aza. Omaly [18 Jolay], natao tany ny an-tananàn'i Buraydah, tao Arabia Saodita ny fitsarana faharoa an'i Umar Al-Saeed, ilay mpitarika ny Fikambanana Saodiana Miaro ny Zo Politika sy Sivily (ACPRA), fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ao amin'ny firenena. Nahemotra tsy nisy fampilazana mialoha ilay fitsarana noho ny fanatrehan'ireo mafana fo maro be raha tokony tamin'ny Alakamisy lasa teo no nanaovana izany.
Al-Saeed, 23 taona, dia nosamborina ny 28 Aprily noho ny fandavany fakàna am-bavany tsy natrehina mpisolo vava. Hatramin'izao, fito ireo mpikambana ao amin'ny ACPRA voafonja.
Tamin'ny fitsaràna azy omaly, namaly ny fiapangana azy i Al-Saeed ary nanameloka ny fampijaliana nataon'ilay mpanao famotorana :
Nofehezina “menotte” ny tanako tamin'ny nanaovana famotorana ahy. Tsy nanaiky ny hanala ny “menotte” ilay mpanao famotorana kanefa narary sy nanery ahy mafy izany. Tena nihantsy ahy ihany koa ilay mpanao famotorana, nilaza ahy taminà anaran-dratsy toy ny hoe “tena omby ianao, mpamono olona” sy ireo maro hafa izay tsy vitako ny hamerina azy.
Ny sasany tamin'ireo niakatra fitsarana androany, sary avy amin'i alajmi01
Ankoatra izay, Al-Saeed, mpianatra amin'ny Anjerimanontolo izay teo an-dalam-pahazoana ny diplomany no nosamborina, dia nilaza fa nandrahona azy ny mpanao famotorana :
Nampitahorin'ilay mpanao famotorana Ahmed al-Thukri aho hoe tsy ataony afaka amin'ilay fanadinana famaranana raha toa tsy miaiky ny zavatra tadiaviny hekeko.
Niezaka nanatrika ilay fitsarana ny vadin'i Al-Saeed sy ny reniny kanefa tsy navelan'ilay mpitsara. Tamina fitsarana talohan'io, nisy mpitsara iray hafa nilaza hoe “tsara kokoa ny lehilahy,” izay nitarika ny fisamborana ilay mpikambana ao amin'ny ACPRA, noho ny fandavany tsy hanatrika ilay fitsarana.